Ogaden News Agency (ONA) – Ifafaalihii Burburka EPRDF oo Lasaadaaliyay & Sababta Keentay.
Ifafaalihii Burburka EPRDF oo Lasaadaaliyay & Sababta Keentay.
Posted by Dulmane	/ July 26, 2016
Dadka ka faalooda arimaha siyaasada Itoobiya ayaa walaac badan ka muujinaya burbur ay sheegeen in uu kusoo af
yeeshay xukunkii qalafsanaa ee EPRDF, mid kamid ah dadka falanqeeya siyaasada Geeska Africa ayaa baraha Internet-ka kuqoray in xukunkii EPRDF ee mudada nus qarniga ah (25 sano) kajiray Itoobiya uu hada umuuqdo mid
gabi kasii laad laada ama burburkiisii uu bilaabmay.
Ku xeel dheerahan arimaha siyaasada ayaa sheegaya in xukuumada EPRDF ay kuguul daraysatay in ay kasbadaan dadka shacabka ah ee kuhoos nool xukun kooda wuxuuna sheegay in bur burka EPRDF uu sabab u yahay cadaalad
darada kajirta guud ahaan wadanka Itoobiya.
Arimaha ay xukuumada wayaanuhu kuguul daraysatay waxaa kamid ah joojinta kacdoonka Qawmiyadaha kala duwan ee lagumaysto, waxaana hada olole aad ah ooy xukunka wayaanaha iskaga kutuurayaan wada Qawmiyadaha Axmaarada iyo Oromada, sidoo kale xukuumada wayaanaha ayaa kudaashay dagaalo aan dhamaad lahayn oo kaga socda qaar kamid ah wadamada oo ay kooxda TPLF-tu gumaysato sida Ogadenia oo kale.
Dhinaca kale wuxuu aduunku ladaalaa dhacayaa dadka qoxootiga ah ee Itoobiya kasoo firxanaya kuwaasoo dunida
usheegaya waaqica kajira Itoobiya, dhinaca kale kooxda TPLF ayaa isku dayda in ay qariso dhibaatooyinka gudaheeda kajira oo hada gaadhay heer aysan qarsoomi karin banaankana usoo baxay.
Dhinaca kale xukuumada wayaanaha ayaa dadka shacabka ah ula dhaqanta si bini’aadam nimada kabaxsan iyagoo dadka u adeegsada sharciga ay Al-qaacida ay usamaysteen, sidoo kale kooxda TPLF ayaa dhamaan ideecadihii iyo TV yadii ka xidhay gudaha wadankii waxayna kooxdu dadaal ugu jirtaan in ay dadaan dhibaatooyinka soo gaadhay shacabka.
Sikastaba ha ahaatee dadka indha indheeya siyaasada ayaan iyagu wax shaki ah kaqabin bur burka soo food saaray